पाँचथर घटना : प्रहरीलाई आफन्तको प्रश्न- एक्लो व्यक्तिले नौजनाको हत्या कसरी गर्‍यो ? | Diyopost
पाँचथर घटना : प्रहरीलाई आफन्तको प्रश्न- एक्लो व्यक्तिले नौजनाको हत्या कसरी गर्‍यो ?
काठमाडौं, जेठ ९ । पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिका–३ आरुबोटे हत्याकाण्डमा मारिएकाका आफन्तले प्रहरीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएका छन् । दुई परिवारका नौजनाको हत्या एकजनाले मात्रै गरेको संकेत गरेर प्रहरीले हत्यारा उम्काउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । एक साताअघि धनराज शेर्माको घरमा नुनमा सिसा मिसाएर तरकारीमा हालिएको घटनालाई समेत प्रहरीले नजरअन्दाज गरेको आफन्तको गुनासो छ ।
शान्ता लिम्बूले एकै व्यक्तिबाट यति ठूलो जघन्य अपराध हुन नसक्ने दाबी गरिन् । अर्का आफन्त मिक्लाजुङ–२ का प्रेमकुमार राईले सिसाकाण्डमाथि प्रहरी गम्भीर नबन्दा हत्याकाण्ड निम्तिएको बताए । ‘सिसाकाण्डमा जाहेरी परे पनि प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान नगर्दा सामूहिक हत्याकाण्ड भएको छ । छानबिनको प्रगति हामीलाई जानकारी नगराएसम्म शव जिम्मा लिँदैनौँ,’ प्रेमकुमारले भने ।
सोमबार राति मिक्लाजुङ–३ आरुबोटेमा ससुरा बमबहादुर फियाकको परिवारका चार र माइला ज्वाइँ धनराज शेर्माको परिवारका पाँचजनाको हत्या भएको थियो । आरुबोटेबाट २५ किलोमिटर टाढा मिक्लाजोङ–७ मा मंगलबार दिउँसो रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका कान्छा ज्वाइँ मानबहादुर माखिम एक्लैले हत्या गराएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान प्रहरीको छ । श्रीमती र ससुरालीसँग सम्बन्ध राम्रो नभएका कारण पनि प्रहरीले मानबहादुरमाथि शंका गरेको हो ।
तर, आफन्तहरूले भने मानबहादुर एक्लैबाट सामूहिक हत्याकाण्ड सम्भव भएको भन्ने प्रहरी अनुमानमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । मिक्लाजुङ–३ का वडाध्यक्ष हस्तराज फियाकले पनि घटनामा एक व्यक्तिको मात्रै संलग्नता अपत्यारिलो रहेको दाबी गरे । घटनाको गम्भीर अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको माग गरे ।
हत्या भएका नौ र रूखमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिएका मानबहादुरको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पोस्टमार्टम भएको छ । तर, प्रहरीमाथि प्रश्न उठाउँदै आफन्तले बुधबार साँझसम्म शव बुझेका छैनन् । प्रतिष्ठानमा राख्ने ठाउँ नभएपछि शव भने पाँचथर नै पठाइएको छ ।
घाइते सीताको अवस्था सामान्य : प्रहरी
आरुबोटे घटनामा भागेर ज्यान जोगाएकी १४ वर्षीया बालिका सीता खजुमको झापाको दमकस्थित लाइफ लाइन अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । प्रदेश १ प्रहरी प्रमुख डिआइजी केदार रिजालले बालिकाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । बालिकासँग अरूलाई भेट्न प्रहरीले कडाइ गरेको छ ।
‘भाग्ने क्रममा लडेर कुहिनोमा अलिकति चोट लागेको छ, फ्याक्चर भएको छैन,’ सीताको स्वास्थ्यबारे डिआइजी रिजालले भने, ‘चिकित्सकको भनाइअनुसार नानीको अवस्था खतरामुक्त र सामान्य छ ।’ नयाँपत्रिका दैनिकबाट